I-Biography nezincwadi ezihamba phambili ze-Almudena Grandes | Izincwadi Zamanje
I-Biography nezincwadi ezihamba phambili ze-Almudena Grandes
U-Alberto Legs | | Abalobi, I-Novela
Kubhekwe njengokukodwa kwe- ababhali abakhulu bezwe lethu, U-Almudena Grandes uwazisa umsebenzi owenziwa izindaba eziqukethe ukugxeka kanye nama-nuances ayingqayizivele eqiniso laseSpain emashumini eminyaka amuva nje. Sibuyekeza i- i-biography nezincwadi ezihamba phambili ze-Almudena Grandes ukuze uthole (noma uthole kabusha) impilo nomsebenzi wakhe.
1 Umlando omfishane ka-Almudena Grandes
2 Izincwadi ezihamba phambili zika-Almudena Grandes
2.2 UMalena yigama le-tango
2.3 I-Atlas of Human Geography
2.4 Inhliziyo efriziwe
2.5 U-Agnes nenjabulo
Umlando omfishane ka-Almudena Grandes
Izithombe: Umtapo Wezincwadi waseCastilla la Mancha
Kusukela esemncane, u-Almudena Grandes (Madrid, Meyi 7, 1960) wayazi ukuthi wayefuna ukuba ngumbhali, ikakhulukazi ekhaya lapho umama wakhe nogogo wakhe babekhuthaza izinkondlo futhi imibala egqamile eyayihlala isetafuleni lezingane yayisetshenziswa ukubhala esikhundleni sokudweba, ubuciko uGrandes athi akakaze abenabo. Kodwa-ke, imihlangano yezenhlalo, futhi ikakhulukazi ukugcizelela kukanina ukuthi afunde "iziqu zentombazane," kwamholela ngena kwiFakhalthi yeJografi kanye Nomlando weComplutense University of Madrid, yize encike kakhulu ngesiLatin.
Ngemuva kokuphothula iziqu, waqala ukusebenza ebhala amazwibela nemibhalo yama-encyclopedia ngaphezu kwendima yefilimu ayenza ngezikhathi ezithile. Ekugcineni, ngo-1989 wayezoshicilela iThe Ages of Lulu, Inoveli yokuqalisa ekhishwe ngabakwa-Tusquets bokuHlela futhi owawina i- Umklomelo We-Vertical Smile Wokulandisa Okumnandi. Impumelelo ihunyushelwe ezilimini ezingama-21 futhi osekutholakele ukuthengisa amakhophi angaphezu kwesigidi, ikakhulukazi ngemuva kokuguqulwa kwefilimu yeBigas Lunas ekhishwe ngo-1990.
Ngo-1991, uGranes washicilela inoveli yakhe yesibili, Ngizokufonela ngolwesihlanu, waphumelela kancane, ngenkathi ngo-1994 omunye wemisebenzi yakhe eyimpumelelo kakhulu wabona ukukhanya, UMalena yigama le-tango, inoveli elandisa isigaba sobusha nobudala somuntu wesifazane osemusha ovela konxiwankulu abaphezulu maphakathi neTransition futhi lokho kuzophinde kwenziwe ifilimu ngo-1996. Ngale noveli, wayezoqala adume kabi ukubaluleka kweqiniso laseSpain leminyaka engama-25 edlule yekhulu lama-XNUMX kanye nokubaluleka kwabesifazane njengabaphikisi bomsebenzi wakhe. Isisetshenziswa sikhona nakwezinye izindaba zakhe njenge I-Atlas of Human Geography, igxile kokungahambi kahle kweqembu labesifazane abane abamele ukwesaba nokungabaza koshintsho lwezizukulwane.
Umsebenzi kaGrandes wavela ngezinyathelo ezinkulu phakathi neminyaka elandelayo, ekubeni Inhliziyo efriziwe, eyanyatheliswa ngo-2007, inoveli yakhe ebiza kakhulu. Igxile enkathini yangemva kwempi, le ncwadi yaqinisekisa intshisekelo yombhali yokuba ngumbalisi womlando wakamuva waseSpain, kusukela eMpini Yombango kuya enkingeni yezomnotho. Lesi sakamuva bekuyisihloko abekhuluma ngaso Ukwanga ngesinkwa, ngo-2015, inoveli eyashicilelwa ngaphansi kwenhloso yombhali yokuqinisekisa isimo sabantu abadala bakithi, leso sabantu abaphila ngesithunzi naphezu kwezimo.
Umsebenzi wakhe wakamuva, Iziguli zikaDkt García, UBig uyaqhubeka nochungechunge Iziqephu zempi engapheli eyaqala ngo-2010 futhi yamnqoba indondo ka-Elena Poniatowska eMexico.
Ngaphezu kokuba ngumbhali wamanoveli, uGrandes ubamba iqhaza ezinhlelweni zeCadena SER futhi ungumnikeli ojwayelekile ku-El País, ngaphezu kokuba ngomunye wamazwi anengqondo kakhulu athinta isimo sezepolitiki, ikakhulukazi ngesikhathi ebesingesinye sezikhathi ezinzima kakhulu ezweni lethu.
Ngale ndlela, futhi uma ubheka emuva, i-Almudena Grandes ayigcinanga ngokuhlanganiswa njengenye ye ababalisi abakhulu besikhathi sethu, kepha njengezwi elidingekayo uma kukhulunywa ngokungena ezinhlwini eziningi zomlando wethu wakamuva.
Izincwadi ezihamba phambili zika-Almudena Grandes
Ishicilelwe ngo-1989, Iminyaka kaLulu kwakuyinoveli yokuqala kaGrandes eyashicilelwa kanye nenhlansi yomsebenzi wakhe wezulu. Indaba yokufunda elandela ezinyathelweni zika U-Lulu, intombazane eneminyaka eyishumi nanhlanu eyondla izifiso ezishubile ezondliwe yisithandwa futhi lokho kumguqula abe ngowesifazane, osevele esekhulile, azicwilise kuzo zonke izinhlobo zezifiso zobulili eziyingozi. Umsebenzi wawungu owawina umklomelo weLa Sonrisa Vertical we-Erotic Narrative futhi wazivumelanisa nesinema ngo-1990 nguBigas Luna noFrancesca Neri noJavier Bardem endimeni yesihloko.
UMalena yigama le-tango
Inoveli ehlanganisa umsebenzi weGrandes yashicilelwa ngo-1994 futhi ivumelane ne-cinema eminyakeni emibili kamuva no-Ariadna Gil endimeni yokuhola. I-X-ray yongxiwankulu baseMadrid ngamehlo e UMalena, intombazane eneminyaka eyishumi nambili ubudala ezama ukuthola indawo yakhe emhlabeni ngokuziqhathanisa newele lakhe, uReina. I-labyrinth yezimfihlo zomndeni bobabili abazozama ukuzithola kumashumi amathathu eminyaka efinyelela kuTshintsho lwaseSpain oluzoguqula konke unomphela. Okukodwa kwe izincwadi ezinhle kakhulu zika-Almudena Grandes, nakanjani.
Ungathanda ukufunda UMalena yigama le-tango?
I-Atlas of Human Geography
Ukuba khona kwabesifazane ezincwadini zeGrandes kufinyelela kuvuthondaba lako kulo msebenzi owashicilelwa ngo-1998, oqala eMnyangweni Wezemisebenzi wendlu yokushicilela. Kuzoba lapha, ngenkathi kunwetshwa i-atlas ngama-fascicles, lapho abesifazane abane, u-Ana, uRosa, uMaría noFran bazobona ubugqila babo emithethweni yesinye isikhathi kanye nokwehluleka kwabo ukwakha umhlaba, noma i-atlas yakho, kuya ngezifiso zakho zamanje. Uhambo oluphelele lokwesaba nezifiso zesizukulwane esedlule, umsebenzi yashintshelwa ebhayisikobho ngo-2007 neCuca Escribano, Montse Germán, María Bouzas noRosa Vila njengabaphikisi abane besifazane.
Ngabe awufundanga okwamanje I-Atlas of Human Geography?
Amakhasi angama-919 alo msebenzi ashicilelwa ngo-2007 aqinisekisa inselelo abakwaGrandes ababezibekele yona yokwakha inoveli yakhe eyayinokuvelela. Ukubuyekezwa kwe- ukwesaba nezimfihlo zeMpi Yombango ukuthi sazi ngabalingiswa baka-Álvaro, obaba wakhe abamba iqhaza empini, noRaquel, umzukulu wendoda eyisihambeli ebuyela eMadrid ngaphansi kwezimo ezingajwayelekile. Umsebenzi onesiphetho esingalindelekile esincoma iprozi eyenziwa ngabakwaGrandes njengephilayo njengoba inhle.
Ungathanda ukufunda Inhliziyo efriziwe?
Isitolimende sokuqala se- Iziqephu zeSaga zempi engapheli, equkethe izihloko ezine kuze kube manje, U-Agnes nenjabulo Ishicilelwe ngo-2010 ifinyelela empumelelweni enkulu ebucayi neyomphakathi. Umsebenzi oqukethe isifiso esijulile sikaGrandes sokuveza ezinye zezindaba ezithinta kakhulu nezimnyama zempi enkulu yaseSpain yekhulu lama-1989. Lo mdlalo uhlelwe ehlobo lika-XNUMX lapho iqembu lamakhomanisi aseSpain linquma ukwenza uhlelo lokufuna ukuphatha iSpain olumakwe yimpi futhi isifiso sokuba nesibindi kuka-Inés osemncane saphenduka saba ngumlingisi ophelele.
Ucabangani ngefayela le- i-biography nemisebenzi ehamba phambili ka-Almudena Grandes?
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » I-Novela » I-Biography nezincwadi ezihamba phambili ze-Almudena Grandes